price adjustment(price adjustment) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
श्वेतगंगाले पायो रु. ३९.८२ करोड आईपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति
मूल्य समायोजनपछि सिनर्जी पावरको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सिनर्जी पावरको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ६३४ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको प्रतिकित्ता ६९७ रुपैयाँ रहेको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार यो...
मूल्य समायोजनपछि लक्ष्मी इक्विटी फन्डको प्रतिइकाइ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको नगद लाभांशका लागि लक्ष्मी म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित लक्ष्मी इक्विटी फन्डको इकाइमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले मूल्य समायोजन गर्दै यो फन्डको प्रतिइकाइ १३.९० रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिइकाइ १७.४० रुपैयाँ पुगेको थियो। अब समायोजित...
मूल्य समायोजनपछि एनएलजी इन्स्योरेन्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले आज सेयरमूल्य समायोजन गर्दै एनएलजी इन्स्योरेन्सको प्रतिकित्ता १ हजार १९८.१८ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको प्रतिकित्ता १ हजार ३१८ रुपैयाँ...
लक्ष्मी उन्नति कोषको मूल्य समायोजन, प्रतिइकाइ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको नगद लाभांशका लागि लक्ष्मी म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित लक्ष्मी उन्नति कोषको इकाइमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आज यो म्युचुअल फन्डको इकाइमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिइकाइ १२.६२ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबारमा यो फन्डको प्रतिइकाइ १५.१२ रुपैयाँ कायम भएको थियो। अब...
मूल्य समायोजनपछि नेको इन्सुरेन्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट प्रस्तावित १५.५ प्रतिशतका लागि नेको इन्सुरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता १ हजार ४२९ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्य अनुसार नेकोको प्रतिकित्ता १ हजार ६५० रुपैयाँ रहेको...
सगरमाथा इन्स्योरेन्सको मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मूल्य समायोजन गर्दै यो कम्पनी प्रतिकित्ता सेयर १ हजार ४०० रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता १ हजार ५५४ रुपैयाँ रहेको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार नै...
मूल्य समायोजनपछि सीआईटी र नेपाल एग्रो लघुवित्तको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आज २ कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि नेप्सेले नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) र नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता सीआईटीको ३ हजार ७४३ रुपैयाँ र नेपाल एग्रो लघुवित्तको ५४९ रुपैयाँ कायम...
१००% हकप्रदका लागि मूल्य समायोजनपछि एचआईडीसीएलको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । हकप्रद सेयरका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) को सेयरमूल्य शुक्रबार समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) १०० प्रतिशत हकप्रद सेयरका लागि एचआईडीसीएलको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ३४३ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो...
मूल्य समायोजनपछि यी २ बीमा कम्पनीको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आज दुई निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेप्सेले गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्रा सिद्धार्थको १ हजार २०५ रुपैयाँ र लुम्बिनी जनरलको ७९१...
मूल्य समायोजनपछि हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आज सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ७४४ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको प्रतिकित्ता ७६६ रुपैयाँ थियो। अब समायोजित...
मूल्य समायोजनपछि अपी पावर र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आज अपी पावर र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सले हकप्रदका लागि अपी पावर र बोनस सेयरका लागि एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता अपी पावरको २९६ रुपैयाँ र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको ७२० रुपैयाँ कायम भएको छ।...
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सेयरमूल्य आज समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले प्रभु इन्स्योरेन्सको मूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ८८४ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको प्रतिकित्ता ९७२ रुपैयाँ रहेको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार यो...
मूल्य समायोजनपछि जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षका लागि बम्पर लाभांश घोषणा गरेको जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आज बिहीबार सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले जनउत्थान सामुदायिकको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ३ हजार ६११ रुपैयाँ कायम गरेको हो। हिजोको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो लघुवित्तको प्रतिकित्ता ५...
मूल्य समायोजनपछि प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको सेयर भाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) आज प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ७७१ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको प्रतिकित्ता ८३३ रुपैयाँ कायम भएको थियो।...
मूल्य समायोजनपछि रिलायन्स फाइनान्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडको सेयरमूल्य आज समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) रिलायन्स फाइनान्सको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता २६२ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २८८ रुपैयाँ कायम भएको थियो। कम्पनीले गत आर्थिक...